IBM inofanirwa kuchengetedza yakavhurika sosi tsika kuRed Hat | Linux Vakapindwa muropa
IBM inofanirwa kuchengetedza yakavhurika sosi tsika kuRed Hat
IBM yave iri kambani yakapa zvakawanda mukuvandudza kweKernel Linux, ivo vashandisa ino sisitimu mune avo mazhinji makuru makuru emadhomputa, maseva uye mainframes uye vakabatsirawo kuLinux Foundation.
IBM yakatenga Red Hat ye $ 34 bhiriyoni, uye izvi zvakashamisa vanhu vazhinji, kusanganisira pasina mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Marco Bill-Peter.
1 Zvinhu zvinofanirwa kuchengetwa zviri munzvimbo
1.1 Red Hat uye IBM inogona kukura pamwe chete mukuwirirana
Zvinhu zvinofanirwa kuchengetwa zviri munzvimbo
Kutaura KuRed Hat Forum 2018 muSydney, Bill-Peter akatsanangura kuti kuwanikwa "kwakakatyamadza" vashandi vekambani, kuratidza kuti kutora uku kunofanirwa kufamba mushe, kuitira kuti vasiye yakavhurika sosi tsika tsika.
Zvikasadaro, basa reRed Hat raizoshandurwa uye izvi zvinogona kutungamira mukupinda kukuru nekambani.
Muizvi, Marco Bill-Peter, Mutevedzeri Wemutungamiri weMutengi Chiitiko uye Engagement kuRed Hat, akati masvondo matatu apfuura akatarisana nenhau. kuti sangano raakange ave naro kweanopfuura makore gumi raizotengeswa kune tech giant IBM.
Kusvika pari zvino uye nekukasira kunge gore komputa iri kuuya mubhizinesi, kune akawanda makore-akaomarara mafomu uye masevhisi.
"Isu tese takavhunduka zvishoma, zvirinani kuti ndakavhunduka," Bill-Peter akaudza Red Hat Forum 2018 muSydney neChitatu.
"Ndine makore gumi nematatu ekuberekwa kubva kuRed Hat, uye kusiyana naMax [McLaren, Regional Deputy President uye General Manager Australia neNew Zealand], handina makore gumi nematatu kubva kuIBM, asi ini ndine makore gumi nematatu kubva kuHP."
Sekureva kwaBill-Peter, hazvisi izvo chete izvo Red Hat inopa izvo zvakasiyana neBMM, asi zvakare chiiIyo kambani ine yayo tsika, imwe yacho zvachose nekuda kwenzvimbo yakavhurika, akadaro.
"Kwandiri zvaive zvakafanana, izvi zvaive zvisina kujairika ... uye ndinofunga vazhinji vedu tinonzwa nenzira imwechete nekuti tinozviburitsa pachena mabviro esimba. "Haingori yakavhurika sosi, zvakare kujekesa kwatinoita mafambiro atinoita sangano." "Akatsanangura."
Red Hat uye IBM inogona kukura pamwe chete mukuwirirana
Pasi pevaridzi veBMM, inotenda kuti Red Hat inogona kukurumidza kuwedzera kweyakavhurika sosi portfolio, kujekesa mikana yekutengesa-soro sechinhu chikuru chebhizinesi.
“Kwandiri ndiri muinjiniya, zvinhu zvakasiyana zvakakosha. Iko kuzvipira kuvhura sosi. Nekuti isu tinotenda chaizvo kuti yakavhurika sosi uye yakavhurika sosi nzira inotungamira kune zvirinani zvigadzirwa, zvirinani kuvandudza, "akadaro, zvakadaro, vachinzwa kuti IBM inonzwa. Yakapa Red Hat iko kuchengetedzeka.
Zano iri nderekuti Red Hat igare ichokwadi kuvhura sosi uye inoshanda sechikamu chakaparadzaniswa uye chakasarudzika, icho chinonzi Bill-Peter chinosanganisira kuchengetedza tsika yaro yakasarudzika.
"Izvo zvakakosha chaizvo," akadaro.
“PaRed Hat tine vanhu zviuru gumi nezvitatu. Kana iyo yakavhurika sosi tsika inotora rova, vimba neni, vazhinji veavo zviuru gumi nevatatu vachange vachienda
"Saka ndinoziva kutengeserana: Kana IBM ikashandisa chetatu chemari yayo yemusika paRed Hat, ndinoziva kuti zvakakomba."
Bill-Peter akataura kuti zvakakosha kuti IBM ibvumidze Red Hat kuti ishande yakazvimirira Uye nepo hutungamiriri hutsva hungaraira gwara nyowani rekambani, harifanirwe kunge rakasiyana zvakanyanya nekwairi kuenda nhasi.
Hongu, zvinofanirwa kuitika nenzira yakapesana, zvese zvinofanirwa kuyerera uye mune iyi mhedzisiro mhedzisiro inofanirwa kuwanikwa pane iya yakatowanikwa.
Uyewo Zviri mune IBM zvakanakisa kuchengetedza Red Hat sezvazviri zvebhizinesi zvikonzero, naBill-Peter vachinongedzera kudyidzana kwesangano rake nevamwe vevamwe tech giants.
Vanoda kuchengeta Red Hat seSwitzerland yakazvimirira. Fembera kwandinobva? ”He said.
"Izvi zvinoreva kuti dai takaitwa chikamu cheBMM, vazhinji vevatengi vedu kana vatinoshanda navo, seAmazon kana Google, havangashande pamwe chete nesu pagore rinotevera rakavhurwa remasanganiswa."
"Ndosaka kuve Switzerland kweIT yeRed Hat kuchikosha chaizvo."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IBM inofanirwa kuchengetedza yakavhurika sosi tsika kuRed Hat
KubvaScratch, yakapusa asi yakangwara noti-kutora app
Cylon: yakanakisa yekuchengetedza application yeArch Linux